Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo) ayaa xadhiga ka jaray waddada isku xidha Kalabaydh iyo Dila oo dhan 21 km, taasoo lagu sameeyey dib udhis dhamaystiran, waxaana laga maalgaliyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF. Mashruucan oo ku kacay lacag dhan 2.03 milyan ayaa ka koobnaa dhismaha laami cusub iyo biriish jiifto ah oo laga dhisay magaalada Dila.
Munaasabadd si rasmiya loogu furayay waddada oo lagu qabtay magaalada Dila ayay ka soo qayb galeen Madaxwaynaha Jamhuuriaydda Somaliland oo ay weheliyaan masuuliyiin sare oo ka tirsan Xukuumadda iyo Saraakiil ka socday Waddamada Qaadhan- bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Tan iyo markii la dhisay waddada isku xidha Kalabaydh iyo Dila oo ahayd 1980 ayaan laguma samayn waxa dayactir ah oo la taaban karo, taasina waxay keentay in waddadu ay noqoto mid aad u burbursan oo ay ka samaysmeen godod waawayn hareerahan ka soo yaraatay, taasoo keentay in gaadiidku ay gabi ahaanba ka weecdaan iyagoo isticmalaaya inay maraan waddada hareeraheeda.
Dawladda Somaliland waxay hore u dhamaystirtay dayactirka waddada isku xidha Dila iyo Borama laakiin qaybta waddada ee u dhaxaysa Kalabaydh iyo Dila ayaa muudo badan dayacnayd.
Xaaladda waddada oo aad u xumaatay awgeed ayaa keentay in wadaddii burburtay gabi ahaanba la qaado, kadibna la dhigay lakab cusub oo ka kooban caratuul , jay iyo sib isku dhafan hoostana laga soo dhisay. Waxa kale oo loo sameeyey saaqiyado cusub oo ay biyuhuu maraan iyo calaamadaha wada marista ee loogu talagalay badbaadada gaadiidka.
Dib udhiska waddadu waxa uu keenay in uu hoos u dhaco in ka badan 50% nooligii lagu raaci jiray gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Hargaysa iyo Borama iyo in uu yaraado wakhtigii loo kala socon jiray Kalabaydh iyo Dila oo markii hore ahayd 50 daqiiqo hada loo kala socdo 15 daqiiqo. Waxa kale oo dhamaystirka waddadu keenay in darawaliintu ay kalsooni ku qabaan safarka ay galayaan iyagoon ka warwarayn xaaladda cimilada gaar ahaan xilliyada roobka.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Silanyo) oo ka hadlay muhiimadda ay waddudu leedahay ayaa waxa u yihdi “Farxad wayn bay ii tahay inaan maanta ka soo qaybgalo furitaanka waddada Kalbaydh iyo Dila ee laga maalgaliyey mashruuca SDF. Siyaasadda Qaranku waxay muhiimadda siinaysaa inuu waddanku isku xidhmo oo aynu horumarino waddooyinka. Waddadanina aad ayey ahmiyad u leedahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ina la qabto oo aynu halkaa ka sii wadno horumarka”
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha guud iyo Guriyeeynta Mudane, Cali Xasan Maxamed oo isaguna xusay natiijada mashruuca dib udhiska waddada waxaanu yidhi “Waxa sharaf inoo ah in aynu maanta halkan xadhiga kaga jarno mashruuca waddada Kalabaydh-Dila oo 21 km ah oo tayadeedu sareyso lagana maalgaliyay Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF. Waxaan u sheegayaa anigoo uga mahad celinaya dowladdaha inaga caawiyay mashruucan in lacagtii ay bixiyeen ee ay Somaliland ku caawiyeen ay gashay halkii loogu talagalay meel baahi wayn looqabayna lagu daboolay.”
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Mudane, Cali Xuseen Ismaaciil (Cali shoombe) ayaa isaguna dhankiis uga mahadnaqay qaadhaan-bixiyayaash Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF taageeradda ay siiyaan Somaliland waxa kale oo uu Wasiirku yidhi “Aniga oo ku hadlaya afka gudida maamusha Sanduuqa Horumarinta Somaliland (JSC), waxaan halkan ka sheegayaa inuu mashruucan dib udhiska waddada Kalabaydh-Dila yahay mid lagu guulaystay oo midho dhal ah, waddadanina ay muhiimad wayn u leedahay isku xidhka Gobalka Awdal iyo goballadda Kale ee Somaliland.”
Tababarkan oo ay fulinaysay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Somaliland waxa ka qayb qaadanayey qaar kamida bulshada ku dhaqan Deegaanka Aroori oo ay tiradoodu dhantahay 31 qof, kuwaasoo ka hawlgalli doon dhulka seerayaasha ah ee Degaanka aroori ee laga fulinayo mashruuca dhuldaaqsimeed ee laga maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Ujeedada tobabrkan ayaa ahayd sidii kor loogu qaadilahaa xirfada aqooneed ee maamulka seeraha iyadoo mudadii uu socdayna lagu bixiyey casharo ku saabsan sida looga hor tago nabaad guurka,caro guurka ,dhir kobcinta iyo dayac tirka dhulka
Munaasabadii xidhitaanka tababarka ayay qaar ka mida xubnihii tababarka qaatay waxay ka warameen dareenkooda iyo faa’iidooyinkii ay ka heleen. Waxaanay balan qaadeen inay uga faa,dayn doonaan dadkii ay ka yimaadeen.
Cabdiwali Muxumed Aadan oo ku hadlayay afka ka qaybgalayaasha tababarka ayaa isagoo ka waramay dareenkiisa waxa uu yidhi “Tobabarkan waa tobabar kor u qaaday aqoontayada sababtu waxaa weeyaan waxaa uu nafahamsiiyey dhulkii nooca loo maamuli lahaa nabaad guurku haduu ku dhaco, hadii ay abaari ku dhacdo sidii loo nasin lahaa”
Gabagabdii tobabrkan ayaa waxaa la soo tusay xubnihii uu tababarku u dhamaaday waxyabihiii ay barteen, waxaana lageeyay beero la nasiyey si ay khibrad uga soo dhaxlaan una soo arkaan farqiga u dhaxeeya dhulka la nasiyo iyo dhulka aan la nasin
Mashruuca Xanaanaynta xoolaha ee deeganka aroori waxaa fulinaya wasaarada xanaanada xolaha ee somaliland waxaana laga maal galinyaa Sanduuqa horumarinta somaliland ee SDF
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waxa uu maanta si rasmi ah gudaha Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta ugu wareejiyay 12 baabuur oo loo soo iibiyay 4 Wasaaradood iyo Wakaalad Horumarinta Wadooyinka; kuwaas oo fulinaya qaar ka mid ah Mashaariicda Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF). Xafladda waxa si rasmi ah u furay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta, Mudane, Cali Ismaaciil Xuseen (Shoombe), sidoo kalena ah guddoomiyaha Komishanka Qorshaynta Qaranka iyo Guddiga Wadajirka ah ee Maamula Sanduuqa Horumarinta Somaliland.
Baabuurtan oo dhan 12 ayaa isugu jira Toyota Land cruiser hardtops iyo Toyota Hillux pick-up oo cusub waxaana isticmaali doona Xafiisyada Maamula Mashaariicda ee ku sugan Wasaaradaha iyo Wakaaladaha Dawladda si ay ugu kormeeraan una daba galaan habsami u socodka Mashaariicda uu maalgeliyay Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) kuwaas oo ku kala baahsan guud ahaanba Somaliland. Laba ka mid ah baabuurtani waa Ambalaasyo ama Gaadiidka Gargaarka Degdegga ah oo ka hawlgeli doona cisbitaalada Ceerigaabo iyo Laascaanood oo hadda ay gacanta ku hayso dib u dhiskooda Wasaaradda Caafimaadka oo uu taageerayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF.
Baabuurtan oo ay keentay shirkadda Toyota Marill – Djibouti, waxa lagu soo iibiyay hab-tartanka furan ah oo ay kawada shaqeeyeen Xafiiska SDF, goob joogayaal ka socday Wasaaradaha, iyo Wakaaladaha Dawladda, iyo Guddida Qandaraasyada Qaranka.
Isaga oo u mahadnaqaya Dawladaha Boqortooyada Ingiriiska, Denmark, Norway iyo Netherlands sida deeqsinimada leh ee ay ugu soo tabaruceen dadka Somaliland, ayaa Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Mudane, Cali Ismaaciil Xuseen (Shoombe) yidhi : “Waxa aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa deeqbixiyayaash ka qeybqaata Sanduuqa Horumarinta Somaliland kuwaas oo ku tabarucay soo iibinta baabuurtan aadka loogu baahnaa. Baabuurtani waxay fududeyn doontaa fulinta mashaariicda iyo gudbinta adeegyada bulshada ee Wasaaradaha iyo Wakaaladaha Dawladda. Waxa sidoo kale looga faa’iidaysan doonaa kor u qaadida kormeerka iyo dabagalka wax-qabadyada mashaariicda iyo horumarkooda si hufan oo wax ku ool ah”.
Isla munaasibadda,waxa isna ka hadley Mudane, Michael Thyge Poulsen oo ku hadlayay afka deeqbixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee SDF waxaanu yidhi: “Waxa aan ku faraxsanahay in ugu danbayntii baabuurta lagu wareejiyay Wasaaradihii loo qoondeeyay ee ka faa’iidaysanayay. Baabuurtan cusub waxay awood u siindoonaan in Wasaaradaha fulinaya mashaariicda laga maalgeliyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland ay si fudud ku gaadhaan goobaha mashaariicdu ka socdaan, una soo kormeeraan si fudud. Waxa kale oo aan ku faraxsanahay in dadweynaha Sool iyo Sanaag ee ku dhaqan meelaha ka baxsan magaalooyinku ay heli doonaan adeeg Ambalaas/Gargaarka Degdegga ah oo lagu kalsoonyahay”.
Wasiiradda Wasaaraddaha Caafimaadka , Waxbarashada, Beeraha , Warfaafinta , Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kaluumaysiga, Wasiir ku-xigeenka Qorshaynta iyo Maareeyaha Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka ayaa iyaguna si isku mida uga mahadnaqay Wadamada Qaadhaan bixiyayaasha kuna amaanay kaalintay ay ka gaystaan horumarka Somaliland. Waxaanay balan qaadeen inay gaadiidkan uga faa;iidaysan doonaan dardar galinta hawlaha kormeerka mashaariicda oo kaliya.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waa deeq lacageed oo loogu talo galay in lagu caawiyo Dawladda Somaliland kaas oo soconaya muddo afar sanno ah. Sanduuqa waxa loogu talo galay inuu qayb ka noqdo Qorshaha Shanta Sanno ah ee dhinaca Horumarinta Somaliland. Sanduuqa waxa maalgaliyay Hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan Dawlada Ingiriiksa (DFID), Hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA), Dawladaha Norway iyo Boqortooyada Netherlands.
Wakaaladda Biyaha Hargeysa ayaa xaflad ugu samaysay xarunteeda Hargeysa dhagax dhigga shaybaadh cusub oo Tayada Biyaha lagu baadhayo.
Iyada oo shaybaadhku yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalka la keeno, marka dhismihiisu dhammaado ayaa loo isticmaalaa la socoshada Tayada Biyaha si loo hubiyo badbaadada biyaha Hargeysa iyada oo la baadhayo in biyaha aanay la socon khashinnada, bakteeriyada, miridhka biraha iyo maadooyinka kimikada ah; sidaasna lagu hubin doono in dadka gaadhaya 1 milyan ee deggan magaalada Hargeysa iyo dadweynaha kale ee Somaliland ay helaan biyo nadiif ah.
Xafladda dhagax-dhigga waxa si rasmi ah u furay madax sare oo ka tirsan Somaliland oo uu ka mid yahay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta Mudane Cali Xuseen Ismaaciil (Shoombe), Guddoomiyaha Guddida Biyaha Hargeysa Marwo Edna Aadan Ismaaciil iyo Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Mudane Ibraahim Siyaad Yoonis.
Mashruucan waxa maalgelinaya Sanduuqa Horumarinta Somaliland, waxana la filayaa inuu ku dhammaado muddo afar bilood ah. Mashruucu waxa uu ka kooban yahay dhismaha xarunta shaybaadhka iyo qalabayntiisaba iyada oo lagu rakibayo qalab casri ah oo lagu hubiyo tayada biyaha.
Isaga oo ka hadlaya xafladdan ayaa Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta Mudane Cali Xuseen Ismaaciil (Shoombe) u mahadnaqay qaadhaan bixiyayaasha maalgeliya Sanduuqa Horumarinta Somaliland, waxana uu yidhi: " Waxan aad ugu faraxsanahay in aan goob joog ka ahaado xafladdan lagu dhagax-dhigayo dhismaha shaybaadhka tayada biyaha oo ay leedahay Wakaaladda Biyaha Hargeysa kaas oo ah midkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalka la keeno. Taasi waxay muujinaysaa sida Dawladda Somaliland uga go'an tahay in ay kor u qaado tayada nolosha dadweynaha. Waxan sidoo kale u mahadnaqayaa qaadhaan bixiyayaasha maalgeliya Sanduuqa Horumarinta Somaliland sida mugga leh ee ay u taageeraan hirgelinta mashaariic nolosha dadka Somaliland si toos ah u taabanaysa"
Guddoomiyaha Guddida Wakaaladda Biyaha Hargeysa Marwo Edna Adan ayaa iyaduna ka hadashay xafladda waxayna tidhi sidatan: " “Sharaf wayn ayay maanta ii tahay inaan goob joog ka ahaado meeshan lagu dhagax dhigayo shaybaadhka biyaha. Biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyo, waxaan odhan karaa waa horumarada waawaayn ee lagaadhay. Waxaynu maanta higsanaynaa in biyaha aynu cabayno aynu hubino”
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Mudane Ibraahim Siyaad ayaa isaguna ka warramay sida ay uga faa'idaysan doonaan shaybaadhkan tayada biyaha: " Marka dhismaha shaybaadhka tayada biyaha la dhamaystiro, Wakaaladda Biyaha Hargeysa waxay awood u yeelan doontaa in ay samayso baadhis ku saabsan tayada biyaha, si joogto ahna ula socoto in biyo nadiif ah la gaadhsiiyo dadweynaha Hargeysa. Wakaaladda Biyaha Hargeysa waxay aad ugu mahadnaqaysaa qaadhaan bixiyayaasha taageera Sanduuqa Horumarinta Somaliland kuwaas oo kala ah Ingiriiska, Denmark, Norway iyo Netherlands."
Dhismaha Nidaamka Biyo Qaybinta xaafadaha Ayax 1 iyo 2 ee Magaalada Hargeysa
Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda biyaha ayaa maanta dhagax dhigay wajiga labaad ee mashruuca horumarinta biyaha ee Gargooray
Mashruucan horumarinta biyaha deegaanka gargooray ee gobolka Awdal ayaa wajigiisii hore waxaa uu ahaa qodista hal ceel biyood oo riig ah ,wajiga labaadna waxaa uu noqon doonaa dhisida nidaamka qaybinta biyaha iyo aasaasida maamulka adeega biyaha oo ka kooban dhisida taangi lagu kaydiyo biyaha iyo dhisida dararka xooluhu ka cabaan.
Munaasibadan dhagax dhiga ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiru dawlaha wasaaradda khayraadka biyaha mudane Mahdi Cismaan Buuri, Gudoomiyaha degmada boon ,iskuduwaha wasaaradda biyaha ,shirkadaha ku gulaystay dhisida nidaamka qaybinta biyaha,salaadiin iyo odayaasha deegaanka.
Ugu horayn waxaa halkaasi ka hadlay xubno iskugu jira masuuliyiinta deegaanka gargooray oo sheegay inay soo dhawaynayaan wajigan labaad ee mashruuca horumarinta biyaha ee deegaanka gargooray .
Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca horumarinta biyaha Maxamed farah Cabdi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa”maanta waxaan halkan u joognaa wajigii labaad oo ah horumarinta nidaamka qaybinta biyaha oo ay ku jiraan qasabadihii ,dararkii kale ee ay xooluhu ka cabayeen,taangiyadii iyo agab kale oo nadaaafada”
Dhanka kale waxaa gudoomiyaha degmada Boon Mudane Maxamed Adam Huseen uu ka waramay xaalada biyo la,aaneed ee ka jirtay deegaanka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “halkan aynu joogno waxaa nagu soo maray ceelkan ceelkii ka horeeyay oo mudo badan la qodoyey oo aan waddo lahayn, ayaa la yidhi hadaad 48 sacadood ku banayn waydaan meel riigaasi maro wuu iska noqonaya buurtan aynu joogno ayaa waxaa lagu baneeyey mudo 8 saacadood oo kaliya waxaana galay 300 nin, hawsha noocaasa ee anu galnay ayaanu hadana ku khasaarnay inaanu biyo helno”
Gabagabadii munasibadan dhagax-dhiga ayaa waxa ka hadlay wasiiru dawlaaha wasaaradda khayraadka biyaha waxaana hadaladiisi kamid ahaa “maanta waxaan idiin dhagax- dhigaynaa mashruuca horumarinta biyaha ee deegaanka gargooray wajigiisii labaad ,ma noqonayso markii isku keen dambaysay ee insha allaah ballayo iyo ceelalna waan idiin qodi doonaa”